Kurlon Bonnell Matrage Migge Msiri | Rayson
Site na ihe ohuru ohuru na teknụzụ na ụzụ na teknụzụ na-eme ka ọ pụta ìhè ma na-arapara na mmepe nke teknụzụ. Kurlon Bonnell Matring matraasi anyị nwere ndị ọrụ ọkachamara ndị nwere ọtụtụ afọ nke ahụmịhe na ụlọ ọrụ. Ọ bụ ha na-enye ndị ahịa ọrụ dị elu karịa ụwa. Ọ bụrụ na ịnwere ajụjụ ọ bụla Kurlon Bonnell matrage ma ọ bụ chọọ ịmatakwu banyere ụlọ ọrụ anyị, nweere onwe gị ịkpọtụrụ anyị. Ndị ọkachamara anyị ga-ahụ n'anya inyere gị aka n'oge ọ bụla. Ngwaahịa nwere nkwụsi ike nke achọrọ. Agaghị agbagọ agbagọ, gbagọrọ agbagọ ma ọ bụ belata n'ogologo na obosara mgbe ịsacha ma ọ bụ nhazi mmiri ndị ọzọ.